Agcine eboshiwe amabhungu ‘adlwengula’ umama (49) – LIVE Express
Inhlanzi igcine ishelwe amanzi kumabhungu amabili obese kuphele izinyanga efunwa, ngezinsolo zokudlwengula owesifazane oneminyaka engama-49 ubudala, eMadadeni, ngaseNewcastle.
Mhla ziyi-17 ku-Juni 2015, ngezikhathi zokugamanxa kwehora lesithupha ntambama, kuthiwa lo wesifazane wayehamba eduze kwenkundla yezemidlalo iPhelindaba, khona eMadadeni, ebheke emsebenzini. Wazithola esevinjezelwa amabhungu amabili okungelineminyaka eyi-18 kanye nelineminyaka engama-20 ubudala.
Kuthiwa la mabhungu ahlukumeza lo wesifazane aphinde amdlwengula kanti nocingo lwakhe kusolwa ukuthi lwathathwa yibo abasolwa.
Emva kwalokho kwavulwa icala lokudlwengula kanye nelokubamba inkunzi esiteshini samaphoyisa eMadadeni. Emva kwalokho kube sekungenelela uphiko lwe-Newcastle Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit ukuze kuqhutshekwe nophenyo.
Emva kophenyo oludonse cishe izinyanga eziyi-8 kugcine kubashele abasolwa njengoba kuthe ngomhla zintathu ku-Febhuwari 2016 kwatholakala umkhondo wala mabhungu khona eMadadeni. Babe sebevela enkantolo yemantshi yaseMadadeni nalapho bebekwe khona amacala.
Ucingo lwalo wesifazane olwaluntshontshwe ngesikhathi sesigameko nalo lugcine lutholakele ngenkathi kuboshwa abasolwa.
Ukhomishana wamaphoyisa esifundazweni iKwZulu Natali, u-Lieutenant General Mmamonnye Ngobeni ukushayele ihlombe ukuboshwa kwalaba basolwa emva kwezinyanga eziyi-8 becashile.
Uthi ubeleselwe ngezinsongo zokubulawa obhale incwadi ngoZuma